Yaa kusoo baxay doorashada kursigii xildhibaan Aamina? - Caasimada Online
Home Warar Yaa kusoo baxay doorashada kursigii xildhibaan Aamina?
Yaa kusoo baxay doorashada kursigii xildhibaan Aamina?
Jowhar (Caasimada Online) – Maxamed Aadan Daahir (Caanoy) ayaa caawa ku guuleystay kursiga #HOP135, kaasoo ay ku fadhisay Xildhibaan Amina Maxamed Cabdi.
Maxamed Caanoy ayaa ka mid ahaa illaa saddex musharax, oo Guddiga Doorashada Hirshabelle ay u diiwaangeliyeen kursigaasi.
Qoraal lagu baahiyay bogga Guddiga Doorashada Hirshabelle ayaa lagu yiri “Murashax Maxamed Aadan Daahir ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay #HOP135 ee BFS oo doorashadiisa ka qabsoontay Magaalada Jowhar ee Caasimadda Dowladda Hirshabelle.”
Maxamed Caanoy oo nin dhallinyaro ah ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ka hawlgalayay Safaaradda Somaliya ee Magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Tani ayaa ka dhigan in Guddiga Doorashada Hirshabelle ay soo geba-gabeeyeen Doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka, walow ay tahay in lagu celiyo kursigii uu ku guuleystay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, sida ay shaaciyeen Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal.